Ukuhlaziywa kweemveliso |
I-C & S Ivenkile yokuThengisa iivenkile ezibonelela ngeemaski eziyi-100,000 ze-KN95 ezibhedlele, inkxaso kwiibhanki zokutya
Abathengisi be-C & S abathengisa kakhulu, inkampani enkulu yokuthenga ukutya elizweni, ngoLwesine ubhengeze inyathelo lokunceda kwilizwe lonke ekulweni ubhubhane we-coronavirus, kubandakanya ngaphezulu kweedola ezingama-300,000 kwiminikelo eya kubonelela iimaski eziyi-100,000 ze-KN95 kwizibhedlele kwimimandla enesiphene, njenge .. .
Unokufuna ukujula imaski yobuso bevalve: Ukulunga kunye nokubi
Inoveli coronavirus bhubhane yazisa uluntu inkcazo entsha yesiqhelo ngoku equka ukunxiba iimaski zobuso. Ngelixa izibonelelo zeemaski zicacile, ukusetyenziswa okuxhaphakileyo kufunyenwe uninzi lweengxaki: ubuso ukucaphuka, ukuphefumla nzima, ukufuma nokwakha iiglasi zenkungu eyoyikekayo. KANINZI: Ubuso ...
Ukugubungela ubuso, iimaski ze-N95 kunye neemaski zotyando: Ngoobani kunye nendlela yokuzisebenzisa
I-CDC ithi wonke umntu kufuneka agqoke ukugquma okungafunekiyo xa unxibelelana nabanye ngexesha lobhubhane we-coronavirus. Kodwa ezo zahluke njani kwimaski yobuso ebangeni lonyango? Iimaski zobuso ziye zaba sisihloko esixoxwa shushu ngexesha lobhubhane we-coronavirus. Uloyiko ngaphezulu ...
Imaski yokuqala ye-100,000 N95 ye-24M yeodolo ifika eLos Angeles
I-LOS ANGELES -I-100,000 yokuqala ye-24-yezigidi ze-N95 zamabanga ezonyango ezi-odolwe sisixeko saseLos Angeles zifike ngoLwesine kwaye ziya kusasazwa kubaboneleli bezempilo kunye nabaphenduli bokuqala. “Isixeko sinamandla amangalisayo okuthenga, ke ngoko sisebenzise oko ngokuthenga ngobuninzi ngentengo ephantsi ...
Iimaski ze-N95 kunye neCoronavirus: Imveliso engakumbi iyaqhubeka
Ukujongana nokukhula kweemaski ngexesha lokuqhambuka kwesifo se-coronavirus, i-COVID-19, iHoneywell ikhawulezisa imveliso kwaye yenza izigidi zeemaski ze-N95 e-United States. Sandisa imisebenzi yokuvelisa kumzi-mveliso oseSmithfield, eRhode Island, ekwavelisa ...
Uhlobo oluthile lweMask ye-N95 inokwenza okungaphezulu kokulungileyo
Yabelana ngeengcali zePinterest zithi iimaski ezithile ze-N95 ezinezivalo zangaphambili zikhusela umsebenzisi kodwa musa ukumthintela loo mntu ekusasazeni i-COVID-19 kwabanye abakufutshane. Iingcali ze-Getty Izithombe zilumkisa uluntu ngokunxiba iintlobo ezithile zeemaski zobuso ze-N95 ezinezivalo zangaphambili. Bathi iimaski zikhusela ...
Ukuvavanya ukuba iimaski ezingaqinisekiswanga ze-N95 ziyasebenza na
Ukusukela oko i-Covid-19 yaqala ukusasazeka e-US, oorhulumente bamazwe bebefuna ukufumana nokukhusela iimaski zokuphefumla ze-N95, uhlobo olutywina ubuso kunye nokucoca amasuntswana asulelayo, ekhusela abasebenzi abaphambili ukuba bangaphefumli i-coronavirus. Ukunqongophala kwesizwe kukhokelele ...
I-FDA iyayivala iMaski engalunganga, iiveki ezi-3 emva kovavanyo olungaphumelelanga
Ukutya kunye noLawulo lweeDrug kuthintele abavelisi abangama-65 ekuthengiseni iimaski kusetyenziselwa unyango. Kodwa intshukumo yeza emva kovavanyo kwinyanga ephelileyo ebonisa ukuba iimaski azifezekisi imigangatho. Kwiiveki ezintathu uLawulo lokuTya kunye neDrug luvumele ukuthengiswa kweentlobo ezininzi zeemaski zobuso ze-N95 zaseMelika ...
Iimaski zeKN95 kunye nobhubhane
Ngokwewebhusayithi ye-Health Canada, yaqala ukugunyazisa ukusetyenziswa kweemaski ze-KN95 ngeenjongo zonyango ngenxa yobhubhane. "Ukwandisa ukufumaneka kweziphefumli ze-N95 ngexesha lobhubhane, eminye imigangatho elinganayo inokwamkeleka… oku kubandakanya zombini ezonyango kunye ...
Imicimbi yezempilo eCanada ikhumbula ezinye iimaski ze-KN95 ezenziwe e-China
Iimaski zibeka 'impilo kunye nokhuseleko lomngcipheko,' ngokutsho kwebhulethini enikezelwe kubangenisi uGeoff Leo · Iindaba zeCBC · Ithunyelwe: Ngomhla we-13, 2020 5: 38 PM CT | Ukuhlaziywa kokugqibela: UCanzibe 14 wezeMpilo Canada ukhumbule iimaski zeKN95 eziveliswe ngabenzi babaTshayina emva kovavanyo lokubafumana ...